हचुवाका भरमा करको दर निर्धारणहँदा उद्योगी समस्यामा, अध्ययन गरेर कर लगाउन उद्योगी व्यबसायीको माग - Purbeli News
हचुवाका भरमा करको दर निर्धारणहँदा उद्योगी समस्यामा, अध्ययन गरेर कर लगाउन उद्योगी व्यबसायीको माग
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ०३, २०७५ समय: १८:२३:४८
विराटनगर / हचुवाका भरमा अध्ययन बिना कर लगाउँदा स्थानीय तहमा बिवाद र करको बिरोध भएको बिराटनगरका उद्योगी व्यबसायीहरुले बताएका छन् । उद्योगी व्यबसायीहरु कर तिर्न उत्सुक भएपनि कर तिर्ने बाताबरण भने स्थानीय तहले नबनाएको उद्योगी व्यबसायीहरुको आरोप छ । संवाद सुमह मोरङगले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा बैज्ञानिक तरिकाले करको दर निर्धारण नहुँदा उद्योग व्यबसाय धारासायी भएका बताएका छन् । संवादमा सहभागि बिराटनगरका उद्योगी व्यपारीहरुले स्थानीय तहले कर बैज्ञानिक ढङ्गले लागू गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
संवादमा उद्योग संगठन मोरङ,मोरङ्ग व्यपार संघ, उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश कमिटि र बिराट व्यपार संघका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । संवादमा सहभागिहरुले कर लगाँउदा करको बारेमा अध्ययन हुनु पर्ने, कारको बर्गीकरण गर्नु पर्ने र दोहोरो तेहेरो कर हटाइनु पर्ने बताए । उद्योग संगठन मोरङ्का अध्यक्ष भिम घिमिरेले हचुवाका भरमा स्थानीय तहमा कर लिइएको दावी गर्नु । उहाँले सिंह दरवारको अधिकार गाउँमा पुगेको नभएर कर लिन सिंहदरबारका राजाहरु गाँउ पसेको आरोप लगाउनु भयो । जुन खालको कर प्रणाली छ त्यसले गाउँका उद्योग सबै भन्द हुने अबस्थामा पुगेको बताउनु भयो । १५ हजार तिर्दै आएका उद्योगले ५ लाखसम्मको कर तिर्नु पर्ने भएको छ । यो कसरी भयो ? उहाँले कर छलफल र सहकार्यको आधारमा स्थानीय तहबाट लगाईनु पर्नेमा अहिले जवरजस्ती लगाईएको बताउनु भयो । उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश १का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले दोहोरो कर लिन नपाउने संबैधानिक व्यबस्था भएपनि दोहोरो तेहेरो कर लिएर उद्योगीहरुलाई पलायन गराउने निती लिएको बताउनु भयो ।
वर्गिकरणको कुरा आफुखुसी भएका छन् । सबै कारोवार गरेकाहरुलाई एउटै बास्केटमा हालेर हेरिएको छ यसले समस्या भएको छ । मोरङ ब्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडाले कर नै नलाग्ने ठाउँमा पनि कर लगाईएको र ट्याक्सको बिषयमा उद्योगीहरुलाई दुख दिएको बताउनु भयो । उहाँले कर कसरी र के आधारमा लिने भन्ने मापदण्ड नभएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो –‘कतिपय उद्योगहरुले स्क्वायर फिटको आधार घरनक्स पासको १५लाखसम्म तिरेको प्रमाण छ । मानशिकता के छ त ? हामी आफै रणभुल्लमा छौ ।’
उद्योगी प्रदिप मुरारकाले स्थानीय तहले उद्योग सञ्चालन गर्ने बाताबरण बनाए जति कर लिए पनि हुने बताउनु भयो । उद्योग खोल्ने जमिन र दर्ता प्रकृया मात्रै सहज गरिदिए पनि उद्योगीहरुले जतिपनि कर तिर्ने बताउनु भयो । तर उद्योग दर्ता गर्ने समस्या र खोल्नै समस्या भइरहेको बेला कर पनि थोपारेर स्थानीय तहले उद्योगी व्यबसायीलाई खेद्न खोजेको बताउनु भयो । महिला उद्योगी प्रतिभा रिजालले स्थानीय तहले महिलाहरुले सञ्चालन गरेको उद्योगलाई प्रोत्साहान दिनु पर्ने बताउनु भयो । ४ बर्ष देखि ब्यवसाय चलाउँदै आएका हामी महिलालाई अहिलेसम्म जसरी काम गरेर केही गर्न सकिन्थ्यो की भन्ने थियो त्यो पछिल्लो करको कुराले निराश तुल्याएको छ ।
उहाँले भन्नु भयो –‘ अब त उद्योग नै बन्द गरेर हिड्नु पर्छ की भन्ने लाग्न थालेको छ ।’ उद्योगी बिपिन काब्राले , करको दर मात्रै बढाएको तर उद्योगीले पाउने सेवा भने नबढाएकोमो चिन्ता व्यत्त गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो –‘अहिलेसम्म कर मात्र तिरेका हामी उद्योगीले राज्यबाट दिने सेवा सुबिधा केही दिएको छैन ।’ उद्योग संगठनका निर्वातमान अध्यक्ष मुकेस उपाध्यायले कर सवैको सहभागितामा छलफल गरेर कर ल्याउनु पर्ने बताउु भयो । बिराट व्यपार संघका महासचिब सुजन थापाले साना व्यपारीहरु करका कारण थप मारमा परेको बताउनु भयो । उहाँले बाणिज्य कार्यालय र स्थानीय तहका बिचमा समन्वय नहुँदा आफूहरु समस्यामा परेको बताउनु भयो । बर्गिकरण बिना करको दर निर्धारण भएकाले एउटै डालोमा हालेर कर लिइएको बताउनु भयो ।
यसरी हुन्छ बैज्ञानिक कर निर्धारण
संवादमा सहभागि उद्योगी व्यपारीहरुले करको दर निर्धारण गर्दा सरोकारवाला पक्षहरुको सहभागितमा अध्ययन गरिनु पर्ने बताउनु भयो । उद्योगी प्रदिप मुरारकाले करको दर निर्धारण गर्दा करको बर्गिकरण गर्नु पर्छ एउटै बास्केटमा उद्योग भनेर कर लिन हुँदैन । उद्योगीहरुलाई अहिले उद्योग दर्ता गर्ने समस्या छ । महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष राउतले भन्नु भयो –‘उद्योग स्थापना गर्ने जग्गा कुन हो भनेर पहिला स्थानीय तहले निर्कौल गर्नु पर्छ । सोहि स्थानमा हामी उद्योग स्थापना गर्छौ । उहाँले स्थानीय तहले कर मात्रै नलिएर उद्योगीहरुलाई सेवा पनि दिनु पर्ने बताउनु भयो । एउटै ढोका भित्र उद्योग दर्ताको प्रकृया सक्ने व्यबस्था भए लागू भएको कर तिर्न पनि समस्या छैन । उद्योगी बिपिन काब्राले स्थानीय तहले उद्योग हेरेर करको बर्गिकरण गर्नु पर्ने र एकै ठाँउबाट एकमुस्ट कर लिने व्यबस्था मिलाए करको बिवाद नहुने बताउनु भयो ।